[Tribune] Macky Sall's ambigu ambigu na-eche ihu West - Jeune Afrique - TELES RELAY
[Tribune] Macky Sall's ambigu ambigu na-eche ihu West - Jeune Afrique
N'ịdabere na nsogbu ọdịda anyanwụ na akụnụba ndị Senegal, Onye isi ala Macky Sall mere nnukwu ọdịiche dị n'etiti echiche na-arịọ maka nkwa nke ọbụbụeze na "ndị mmekọ" ndị na-alaghị azụ ikwu uche ha banyere omume nke ihe omume obodo.
N'akwụkwọ ya Adigu Mara, nke ọgbọ ụmụ akwụkwọ Afrịka na-amụ, onye edemede Senegalese bụ Cheikh Hamidou Kane na-eme ka odogwu onye ukwu ya, Great Royal, na-ekwu na ndị Africa ga-aga mụọ na West "nka nka nke mmeri n'enyeghị nkwenye". N'izu a, Macky Sall emeela ihe dị iche: ọ gaara ejirila nkà ịkatọ mee ihe na-enweghị mmeri.
Kwenye echiche ya n'ihu ọha. Ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na-aga n'akụkụ nke nkwenye miri emi nke onye a. Enweghi ike ibuso oke ọnụ ahịa a nyefere n'aka ndị ọdịda anyanwụ ịchị akụ na ụba ndị Senegal.
Nke mbu, Macky Sall, site n’aka Mịnịsta nke ihe eji eme ihe, zigaara onye nnọchi anya France ozi akwụkwọ mkpesa nke mkpesa. Egosighi eziokwu nke akwụkwọ ozi a. Agbanyeghị, akwụkwọ akụkọ a na-agụ kwa ụbọchị na mba ahụ, The Observer, na-egosi na ọ dị. Ebe isi nso na onye isi ala, onye bụbu minista na-ahụ maka nkwukọrịta maka onye isi ala, El Hadj Hamidou Kassé, na-egosi nke a.
Ọgba mgba na gburugburu
Nmebi nke "lese-Mackyesté" nke French Excellence? O megidere ndị ọchịchị Senegalese, na-ekwu n'oge mgbasa ozi redio nke Sunday na TER, Regional Express Train, agaghị enwe ike ibugharị ụgbọ njem azụmahịa site na Eprel 2019. Agbanyeghị, na mbido November, Minista Abdou Karim Fofana, na Ego ebubo na ndị ọzọ gbasara atụmatụ Town, egosila na TER ga-atụgharị “n'ime ọnwa atọ ma ọ bụ anọ”.
Onye nnọchi anya mba France nọ na Dakar, Philippe Lalliot, etinyeghị penketị a na nnọchi anya gọọmentị na-emebu na Senegal. O kwukwara na ụlọ ọrụ nnọchi anya gọọmentị ya gwara Senegalese steeti na ịmalite iweghachi visa na Senegal abaghị uru ọ bụla n'ụzọ akụ na ụba, ebe ọ bụ na ọ kpatara mmerụ ahụ njem, site na ibelata ọnụ ọgụgụ ndị mbata ndị ọbịa, mgbe edobere ya n’afọ 2012.
Ọ bụrụ na onye nnọchi anya ahụ lebara anya na ihe a niile bụ "Anyị etinyeghị aka na ihe dị n'ime Senegal", agbanyeghị na ọ bụ ntụgharị nke ndị Senegal ghọtara. Akwụkwọ ozi mkpesa dị mkpa maka onye nnọchi anya gọọmentị ndị a na-emebu ọchịchị nke na-akpa agwa na VRP nke ụlọ ọrụ French arụnyere na Senegal.
Ihe ahụ merenụ na-abịa n’oge esemokwu dị n’etiti steeti Senegalese na Senac SA, nke na-arụ n'okporo ụzọ ndị Dakar na-ebugharị (“ndị na-ebugharị okporo ụzọ”, ndị na-agba mbọ), ndị gọọmentị Senegalese chọrọ ịtụle ọnụego a leda. Ihe onye isi oche Senac SA megidere n'ihu ọha.
Na-ekwe nkwa ọbụbụeze
Na mkpocha, Senegal nọ na nsogbu schizophrenic: onye nkịtị Senegal na-azụ ahịa ya na Auchan, Carrefour na Casino, zụta mmanụ ya na Total, ekwentị ekele Orange ma laa ugwo ulo onu ogugu n'okporo uzo di elu na Senac SA. Companieslọ ọrụ French niile.
Mana n'otu oge ahụ, echiche ndị mba Senegal nwere ọmịiko maka ọgụ a Guy-Marius Sagna, onye a tụrụ mkpọrọ ugbu a, nke mkpọsa okwu banyere otu nwa amaala bụ nnọọ "France ekpocha!" ".
Otu oxymoron megide Justin Trudeau
Macky Sall nwere ọtụtụ ihe ime iji mee ka afọ jupụta n'echiche na-achọ mmesi obi ike nke ọbụbụeze. O nwekwara ohere ịme mmega ahụ n'oge izu ụka nke Prime Minister Canada Justin Trudeau. Nke o kwagidere na ọ bụrụ na ọ kwanyeere ịgbachitere ihe ndị ruuru ya (nke ndị na-edina ụdị onwe), "agaghị ekwe omume na nwoke ịlụ nwoke na nwanyị na Senegal" n'ihi "ụkpụrụ" nke mba ahụ.
N'ebe ahụkwa, Macky Sall gbara ụba na ntụzịaka ọtụtụ ndị na-ekwu na Senegal, nke na-achọghị ihe iwu jiri kọwaa dị ka omume na-ekwekọghị n'okike. Onye isi ala Sall na-egosi na “igbochi nwoke idina nwoke idina nwoke na nwanyị”, ọbụlagodi ma ọ kọwakwuru ozmoron nke a.
N’edetu ọzọ, Macky Sall kwuru na Senegal na-akwado nkwado Canada maka ọgbakọ UN Security Council. Nkwado dịtụ egwu, mgbe anyị maara na izu ole na ole tupu mgbe ahụ, Senegal na-enwe nzukọ na-ejedebe arịrịọ dị ukwuu maka oche atọ ga-adịgide adịgide maka Africa na Council Security United Nations.
Yabụ ị kwesịrị ịma; n’ihi na oche agaghị adị onye ọ bụla. Ezigbo isi maka Macky Sall? Na nnọkọ 33 nke nzukọ nke European Union, ọ tụrụ aro ka IMF nye ikike mba Africa iwepu isi karịa nke gọọmentị enwere na 3%, iji nye aka maka ego ndị agha Africa nke ga-etinye aka na Sahel karịsịa na Sahel. . Ijikwa mmekọrịta ya na West bụ mmezi nguzozi. Ezigbo njem, nke Macky Sall ga-eji obi ụtọ na-enweghị atụ wepụta onwe ya.
Ka ndị Green si akwadebe maka ntuli aka onye isi ala 2022
Onye isi ala 2022: nyocha nke Baroin
Isiokwu a pụtara na mbụ NDỊ AFRICA
Moroko: Morocco: ihe omume ohuru nke “ndi otu oru ugbo” - La Libre Afrique
cara untuk menyimpan video dari instagram ke galeri - VIDIO
Ivory Coast - Kouadio Konan Bertin (PDCI): “Ọ bụrụ Onye isi ala Bédié egosipụtaghị…